Fandresena 5 lehibe indrindra amin
Nangoninay ny stock izay nahazo tombony lehibe indrindra amin'ny Transportation. Ireo tahiry ireo dia tsy mitovy amin'ny lafiny maro ary ilaina ny mandalina azy ireo hahalala ny fahasamihafana ary angamba manondro ireo fampiasam-bola vaovao vaovao. Ny hoe ny stock dia miakatra dia tsy voatery midika fa hitohy, saingy indraindray kosa no marina. Zava-dehibe ihany koa ny manombatombana ny fanapahan-kevitry ny fampiasam-bola tsy miankina amin'ny zava-misy fa ny tahiry dia miakatra betsaka amin'ny andro iray, fa mba handinika ihany koa ireo antony hafa toy ny fiakaran'ny tsenany, fahalianana amin'ny tahiry (volan'ny tahiry), ny vola miditra aminy. ary tombony ary amin'ny ankapobeny dia fitomboana / mihena ny vanim-potoana lehibe kokoa (tsy iray andro fotsiny). Andao hojerentsika ireo mpandresy lehibe 5 tao amin'io andro io:
Expeditors International of Washington dia nahazo tombony 1.47%. Ity orinasa ity dia mirehareha amin'ny marika $ 12.96B. Tamin'ny herinandro lasa fotsiny dia niova ny -3.97% ny tahiry. Tamin'ny volana farany tamin'ny -10.02% ary tamin'ny taona farany tamin'ny -10.33%. Tamin'ny tatitra farany momba ny vola azony dia namoaka ny vola 8.138B $ miaraka amin'ny fitomboan'ny fidiram-bolan'ny 17.59%. Mitombo ny tombony azo amin'ny $ 2.620B.
Ny firongatry ny tahiry dia azo refesina amin'ny isan'ireo vidin'ny varotra nividy izay atao amin'ny andro iray. Ho an'ny EXPD, dia io ho an'ny 894501 maromaro.
DHT Holdings dia nahazo tombony 1.46%. Ity orinasa ity dia mirehareha amin'ny marika $ 0.86B. Tamin'ny herinandro lasa fotsiny dia niova ny -3.19% ny tahiry. Tamin'ny volana farany tamin'ny -11.77% ary tamin'ny taona farany tamin'ny 28.10%. Tamin'ny tatitra farany momba ny vola azony dia namoaka ny vola 0.376B $ miaraka amin'ny fitomboan'ny fidiram-bolan'ny 5.88%. Mitombo ny tombony azo amin'ny $ 0.138B.
Ny firongatry ny tahiry dia azo refesina amin'ny isan'ireo vidin'ny varotra nividy izay atao amin'ny andro iray. Ho an'ny DHT, dia io ho an'ny 965538 maromaro.
Grupo Aeroportuario Del Pacifico S.A. B. de C. dia nahazo tombony 1.26%. Ity orinasa ity dia mirehareha amin'ny marika $ 6.04B. Tamin'ny herinandro lasa fotsiny dia niova ny -1.17% ny tahiry. Tamin'ny volana farany tamin'ny -10.18% ary tamin'ny taona farany tamin'ny 7.00%. Tamin'ny tatitra farany momba ny vola azony dia namoaka ny vola 0.721B $ miaraka amin'ny fitomboan'ny fidiram-bolan'ny 14.62%. Mitombo ny tombony azo amin'ny $ 0.595B.
Ny firongatry ny tahiry dia azo refesina amin'ny isan'ireo vidin'ny varotra nividy izay atao amin'ny andro iray. Ho an'ny PAC, dia io ho an'ny 56781 maromaro.
Brinks Company (The) dia nahazo tombony 1.25%. Ity orinasa ity dia mirehareha amin'ny marika $ 4.22B. Tamin'ny herinandro lasa fotsiny dia niova ny -9.48% ny tahiry. Tamin'ny volana farany tamin'ny -21.55% ary tamin'ny taona farany tamin'ny -10.57%. Tamin'ny tatitra farany momba ny vola azony dia namoaka ny vola 3.489B $ miaraka amin'ny fitomboan'ny fidiram-bolan'ny 4.24%. Mitombo ny tombony azo amin'ny $ 0.786B.
Ny firongatry ny tahiry dia azo refesina amin'ny isan'ireo vidin'ny varotra nividy izay atao amin'ny andro iray. Ho an'ny BCO, dia io ho an'ny 505078 maromaro.
J.B. Hunt Transport Services dia nahazo tombony 0.89%. Ity orinasa ity dia mirehareha amin'ny marika $ 9.88B. Tamin'ny herinandro lasa fotsiny dia niova ny 0.26% ny tahiry. Tamin'ny volana farany tamin'ny -2.90% ary tamin'ny taona farany tamin'ny -21.30%. Tamin'ny tatitra farany momba ny vola azony dia namoaka ny vola 8.615B $ miaraka amin'ny fitomboan'ny fidiram-bolan'ny 19.82%. Mitombo ny tombony azo amin'ny $ 3.367B.
Ny firongatry ny tahiry dia azo refesina amin'ny isan'ireo vidin'ny varotra nividy izay atao amin'ny andro iray. Ho an'ny JBHT, dia io ho an'ny 1088982 maromaro.